बैँक/बिमा | Ujyaalonetwork.com
रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्जन गर्‍यो १ अर्ब ३८ करोड बीमा शुल्क
Posted on August 16, 2019 Author : उज्यालो प्रतिनिधि
काठमाडौं । नयाँ जीवन बीमा कम्पनी मध्यको एक रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष ७५/७६ को चौथो त्रैमासको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। केही नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुले पुराना जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई टक्कर दिदै आएकोमा रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सले पनि उत्साहजनक वित्तिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७५/७६ मा १ अर्ब ३८ करोड […]
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले एक वर्षमा आर्जन गर्‍यो, ३ अर्ब ६ करोड बीमा शुल्क
काठमाडौं । जीवन बिमा कम्पनीको क्षेत्रमा आफ्नै छुट्टै स्थान हासिल गर्न सफल युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को चौथो चौमाससम्मको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बजारमा छोटो समयमै स्थापित् हुन सफल यस कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यस चौमासमा युनियनले ३ अर्ब ६ करोड कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । जसमा […]
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने
Posted on July 24, 2019 Author : Ujyaalo Network
काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बुधबार) ४ बजे चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ। गत शुक्रबारदेखि मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीको छलफलमा जुटेको राष्ट्र बैंकले बुधबार बिहानमात्रै सहमति जुटाउन सकेको हो। राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेसँगै बैंकहरूको संख्या घटाउने नीतिमा लागेका गभर्न डा. चिरञ्जीवी नेपालले त्यसका लागि प्रोत्साहन पुग्ने गरी चालु वर्षको मौद्रिक […]
खुल्यो एनआइसी एशिया बैँकको नयाँ शाखा
काठमाडौ । एनआईसी एशिया बैंकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ शाखा कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २६, गोंगबु स्थित गोंगबु शाखाको सोहि वडाका वडा अध्यक्ष ख्यामराज तिवारीबाट आइतबार भव्य समारोहका बीच उद्घाटन भयो । एनआईसी एशिया बैंकले मुलुकभर २८२ शाखा कार्यालयहरु, २८९ एटिएम, ४० वटा एक्स्ाटेन्सन काउण्टर एवं २५ वटा […]
फर्पिङ्मा खुल्यो सिद्धार्थ बैँकको शाखा
काठमाडौं । सिद्घार्थ बैंकले आइतबार फर्पिङ शाखाको औपचारिक उद्घाटन गरेको छ । बैंकको फर्पिङ शाखाको उद्घाटन दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतबाट भएको थियो । सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले बैंकले देशभर १५३ वटा शाखा (४ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), १०० शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १६१ एटीएम र १,३०० भन्दा बढी पीओएस मेसिनमार्फत् उच्चस्तरिय […]
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स २० औँ वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अन्तर्गत पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ बाग्लुङको आयोजना र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स बाग्लुङको सहकार्यमा कम्पनीको १९ औं बार्षिकोत्सब भब्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । संघले बार्षिकोत्सबको अवसर पारेर लालीगुँरास चोकमा रहेको मानव आश्रमका अनाथ बालबालिका, असहाय वृद्ध हरुलाइ खाद्यान्न सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ । वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स प्रदेश नम्बर […]
सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा ग्लोबल आइएमई बैँकको निशुल्क शिविर
काठमाडौं। ग्लोबल आइएमई बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गत साता सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाको जमुवाचोकमा निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरेको छ। बैंकको इटहरी शाखाको आयोजना र विराटनगर आँखा अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा यो शिविर भएको हो। बैंकको तर्फबाट आँखाका रोगीलाई निःशुल्क औषधी तथा दृिष्ट दोष भएका बिरामीहरुलाई निःशुल्क चश्मा समेत बितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ। शिविरमा मोतीबिन्दु भएका […]
नेपाल इन्स्योरेन्सको बीमा सेवा नबिल बैंकबाट पाईने
Posted on May 5, 2019 Author : उज्यालो प्रतिनिधि
नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. र नबिल बैंक लि.बीच बीमा सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा नेपाल इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिजयबहादुर शाह र नविल बैंकका तर्फवाट रेटेल हेड नीरज शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता भए सँगै नबिल बैंकको कर्पोरेट तथा विभिन्न शाखा कार्यालयहरुवाट बैंकका ग्राहकहरुले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले प्रदान […]
सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्ने पुरुषको बढ्यो
‘ईश्वर’सँग पूर्वमाओवादी पक्ष सशंकित
अभिनेत्री शिल्पा पोखरेललाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश
उपनिर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग नहुने
ऋणको किस्ता तिर्न नसकेपछि वायुसेवा निगम संकटमा